14 June 2013 - Fante Online
Friday Sermon: Submit to Allah and Seek His Protection - 14th June 2013 - Fante Translation.
Fida Nyamesɛmka: Ebͻwbira 14, 2013.
(Friday sermon – 14th June, 2013 – Fante Translation)
YƐ AHOBRASE MA ALLAH NA SERƐ NE NKYƐN BAMBƆ.
“Na wͻka dɛ, obiara nnkotum ahɛn Ɔsor Ahenman no mu gyedɛ ͻyɛ Jewnyi anaa Kristiannyi. Iyi yɛ hͻn ankasa hͻn apɛdze hun. Ka dɛ hom mfa hom ngyinado mbra, sɛ hom yɛ nokwarfo a”
“Mbom nyia biara a ͻbrɛ noho adze koraa ma Allah wͻ ber a ͻwͻ suban a odzi mu mapa no obenya n’akatua wͻ n’Ewuradze hͻ. Suro biara nkɛba hͻn do na wͻnnkɛdzi awerɛhow so” (2:112-113).
Obi kyerɛɛw krataa brɛɛ Hadhrat Khalifatul Masih wͻ suro a woenya no wͻ Pakistan aban fofor yi ho dɛ, ana aban fofor yi so bɛtseetsee Ahmadiyyafo dɛ mbrɛ aban dadaw ahorow a wͻabɛsen kͻr no yɛɛe no? Nyankopͻn nkotsee na onyim dza obesi, na dɛ ͻyɛ aban fofor anaa aban dadaw, dɛ mbra a otsia Ahmadiyyafo no da ho wͻ hͻ yi dze, ͻyɛ asɛm kor noara. Onnyi dɛ obi nya suro fofor biara osiandɛ ͻyɛ adze dadaw noara a ͻyɛ ͻhaw ma Pakistan Ahmadiyyafo no. Dza ohia ma Ahmadiyyafo a wͻwͻ Pakistan ara nye mpaabͻ. Sɛ yɛwͻ enyisom wͻ wiadze aban bi mu a, nna yɛbͻdwen dɛm. Mbom sɛ hɛn werɛ hyɛ Nyankopͻn mu dza, na dɛm so na ͻwͻ dɛ ͻba, ͻno onnhia dɛ yɛbͻdwen dɛ sɛ aban bi ba a gyinabew no bɛsesa ma no mu ayɛ dzen anaa wͻayɛ mbrɛw.
Sɛ yɛwͻ awerɛhyɛmu wͻ Nyankopͻn mu dza, ͻno dɛm adwen yi nnhia mma hɛn. wiadze yi mu aban bɛtseetsee hɛn dɛ mbrɛ wͻyɛɛ no aber a wͻhyehyɛɛ mbra a otsia Ahmadiyya Kuw yi. Anohoba Mɛsia (ANN) ne aber do no, atanfo hyɛɛ ase dɛ wͻretsia hɛn. Ɔwͻ mu dɛ dɛm aber no nna ͻnnyɛ aban no na otsia hɛn naaso aban no mu edwumayɛfo na wͻtsia hɛn. Dɛ mbrɛ ͻtse biara, sɛ ͻyɛ ebɛn aban, hͻn nyinara ayɛ adwen kor eyi hɛn efi Islam som no mu. Dɛm ntsi aban biara a ͻbɛba no kͻ do ara tseetsee Ahmadiyyafo.
Ampaara dɛ, wͻtͻ kͻ do ara tseetsee hɛn. Hɛn enyi nnda wiadze yi mu aban biara no papayɛ do na onnhia dɛ wͻma hɛn tum krataa ansaana yɛayɛ Muslimfo. Muslimnyi mapa nye obi a ͻyɛ Muslimnyi wͻ Nyankopͻn N’enyim. Obi a ͻgye Nyankopͻn No Koryɛ dzi na ͻgye Nkͻmhyɛnyi Muhammad (NNN) dzi, dɛ ͻyɛ Nkͻmhyɛnyi a otwa tu a ͻdze mbransɛm a odzi ewie aba na ͻyɛ Akͻmhyɛfo nyinara hͻn daadwee. Sɛ yɛhwɛ no dɛm dza, ͻno Ahmadiyyafo yɛ Muslimfo mapa wͻ ndzeyɛɛ mu sen Muslimfo a wͻaka no. sɛ dɛm mber mu Muslimfo nye hͻn aban, anaa aban asoafo anaa edwumayɛfo yɛ bͻn tsia hɛn a, wͻyɛ adzebͻnyɛfo wͻ Nyankopͻn enyim. Mbom ͻma yɛtwe bɛn Nyankopͻn na ampaara dɛ dza wͻreyɛ yi twe Ahmadiyyafo bɛn Nyankopͻn.
Ɔrekyerɛ “mbransɛm” (constitutional) mu kyerɛ hͻn a wonnyim no, Huzoor kaa dɛ, sɛ yɛhwɛ Pakistan mbransɛm mu a, Ahmadiyyafo nnyɛ Muslimfo wͻ mbra kwan do anaaso wͻ asͻr mu. Ɔyɛ nwanwa dɛ kabi ma menka bi aban bi bɛyɛ mbra afa obi ne gyedzi ho. Mbra a wͻhyɛɛ no wͻ 1974 a nna otsia Ahmadiyyafo no ekyir no, nsordaafo aban a ͻbaa no dze ahokyer baa Ahmadiyya Kuw no do. Ampaara dɛ dɛm mbra no kyerɛ dɛ Ahmadiyyafo nnyɛ Muslimfo wͻ aber a sɛ ehwɛ a Ahmadiyyafo no na wͻrobͻ Islam nokwar no ho dawur wͻ wiadze fɛnandze nyinara. Mbom hͻn a wͻka dɛ wͻyɛ Muslimfo wͻ mbra kwan do no dze enyimguase brɛ Islam.
Mpɛn pii na nkorͻfo taa bisa Hadhrat Khalifatul Masih dɛ Muslimfo a wͻnnyɛ Ahmadiyyafo yɛ no nngye nnto mu dɛ Ahmadiyyafo yɛ Muuslimfo tsitsir wͻ Huzoor ne America nserahwɛ no mu. Na wͻka dɛ Ahmadiyyafo yɛ Muslimfo na hͻn ndzeyɛɛ so yɛ soronko, na wͻka dɛ wͻdze nsakyer reba wiadze na iyi bɛyɛ dɛn aba mu? Huzoor yii hͻn ano dɛ nsakyer no gu do reba dɛ mbrɛ nyimpa mpempem rehɛn Ahmadiyya Kuw no mu mber biara no. Na yɛbͻkͻ do ara akɛpem ber a wiadze nyinara bɛgye ato mu dɛ Islam yɛ asomdwee na nkabͻmu som na Nkͻmhyɛnyi Krͻnkrͻn Muhammad (NNN) yɛ asomdweefo a ne saso mmba da.
Hadhrat Khalifatul Masih kaa bio dɛ, ͻnnyɛ ͻdasanyi biara n’edwuma dɛ obosusu obi ne gyedzi anaa no som. Obiara da ͻnoara ne gyedzi edzi. Dɛ aban bi renngye hɛn nnto mu dɛ yɛyɛ Muslimfo anaa ͻbɛgye hɛn ato mu no mpa nnkyerɛ hwee osiandɛ hͻn a wͻagye Anohoba Mɛsia (ANN) edzi no soo yɛ Muslimfo. Mpo wͻdzi mu sen hͻn a wͻaka no a wͻnngye no nndzi no. Sɛ aban bi nye n’asoafo na no mu edwumayɛfo yɛ bͻn tsia hɛn a, hͻnara na wͻbɛsɛe hͻn aban no na woegu aban a ͻtse dɛm no enyim ase. Sɛ aban no enyim gu ase a, dɛ yɛyɛ Pakistanfo yi ͻkã hɛn na ͻyɛ hɛn yaw osiandɛ Ahmadiyyafo abͻ afͻr akɛseakɛse ama Pakistan man no.
Sɛ wokumkum nyimpa wͻ Islam dzin mu a, nnyɛ dɛ wͻgu Pakistan man no nko enyim ase, mbom dɛm enyimguase yi kã Islam som a ͻyɛ asomdwee som no. Kur’an ka dɛ, oye dɛ pɛrpɛryɛ yɛ edwuma kansa ͻwͻ hͻ ma w’atanfo mpo a, ͻwͻ dɛ idzi pɛrpɛr. Kuran ka dɛ “Na mma nkorͻfo hͻnho enyitan nnsiiw hom kwan dɛ hom bedzi pɛrpɛr. Hom ndzi pɛrpɛr mber nyinara, iyi na ͻbɛn tseneneeyɛ na hom nsuro Allah” (5:9). Iyi nye Islam ne nkyerɛkyerɛ na iyi na yɛkyerɛ ma Islam atanfo ma wonnya nyiano biara. Muslimnyi mapa biara dwen nyamesuro ho yie na ͻnntͻ ka dɛ Muslimnyi mapa nnkedzi pɛrpɛr anaaso ͻbɛyɛ etsirmuͻdzen. Nokwar nye dɛ, dzibewdzifo a wͻdzi Pakistan man no enyim no nnyi nyamesuro ketsewaabi mpo, dɛm ntsi yɛbohu dɛ wonndzi pɛrpɛr na wͻyɛ etsirmuͻdzenfo.
Ndafua kakra a abɛsen kͻr no, wͻyɛɛ nhyehyɛɛ bi dze daa U.K Jama’at ne mfenhyia ͻha (100) edzi wͻ UK mbrahyɛ begua mu. U.K mbrahyɛ beguafo eduonan ebien (42) na wͻbaa dwumadzi yi ase a nna aban soafo pinyin n’abadziekyir ka ho. Na aban soafo esia (6) na amanaman ananmusifo na ekunyim ahorow pii. Huzoor kasaa fa Islam ne nkyerɛkyerɛ korangyee no ho nye Nkͻmhyɛnyi (NNN) ne brapa a ͻyɛ fasusu no ho nsɛm. Nhyiamu no asefo no nyinara enyi gyee kasa no ho na wͻkaa dɛ sɛ Ahmadiyyafo bͻ asomdwee nsɛm ho dawur na wͻbͻ ho bra, mbom wonnhu iyi wͻ Muslimfo nkaa no mu. Amanyɛfo no bi ka dɛm nsɛm yi wͻ enyidzi mu binom so ka no wͻ ahwɛyie kwan do.
Ber a Huzoor gyinaa Kuran na Nkͻmhyɛnyi (NNN) no subanpa do kasaa no, dodowara huun Islam ne nkyerɛkyerɛ pa no. Aman bi ananmusinyi bi a ͻyɛ Kristiannyi kaa dɛ Huzoor ne kasaa no mu kor biara tͻͻ n’akoma do papaapa. Nyimpa yi ta aba hɛn nhyiame ase, ntsi onyim hɛn kakra. Huzoor kaa kyerɛɛ no dɛ, ne nsɛm no nnyi hͻ mma ͻno nkotsee na mbom ͻwͻ dɛ ͻbͻ nsɛm no ho dawur wͻ beebiara a ͻwͻ. Na owura no buaa dɛ ͻreyɛ dɛm dadaw. Hɛn nsɛm renya nsunsuando pa wͻ nkorͻfo do naaso Maulwifo no dze, ͻhyɛ hͻn ebufuw mpo.
Yɛrebͻ hɛn ho mbͻdzen dɛ yɛbeyi dzinbͻn a wͻabɛda Islam do no efi hͻ na yɛbͻkͻ do ara ayɛ Insha Allah! Iyinom nyinara ekyir no amanyɛfo nye nyimdziifo a wͻwͻ Muslim amanaman ahorow mu no dzi Maulwifo ekyir tseetsee Ahmadiyyafo wͻ Islam dzin mu. Dza wͻyɛ nye yi, dɛ mbrɛ yɛbͻkͻ do ayɛ dza yɛreyɛ no, dɛmara so na hͻn so wͻbɛyɛ. Onnyi dɛ yɛma ͻhaw hɛn na mbom yennya awerɛhyɛmu na enyidado biara wͻ hͻn mu. Sɛ wͻbedzi pɛrpɛr a Nyankopͻn bɛma hͻn ho akatua. Sɛ annyɛ dɛm dza, hɛn Nyankopͻn nye hɛn wͻ hͻ aber nyinara. Ɔbͻdom hɛn wͻ wiadze yi mu nye hɛn wu ekyir dɛ mbrɛ N’anohoba kyerɛ no. Na hͻn a wͻyɛ bͻn tsia hɛn no, mbrɛ ͻtse biara Obosuo hͻn mu atwe hͻn ase.
Dɛ yɛdze hɛn enyi bͻto wiadze yi mu aban do, ͻfata dɛ yɛtwer Nyankopͻn na yɛdzi Ne mbransɛm do. Hͻn a wͻagye som abͻ do na wͻka dɛ obiara a woenndzi hͻn ekyir no yɛ ndom nyimpa na ͻbͻkͻ Ogya amandzehun no mu, na wͻama hͻn akadofo enya kwan dze ayɛ dza wͻpɛ biara etsia Ahmadiyyafo no. hom nhwɛ dɛ aban a ͻkasa fa mbransɛmho hia a ͻhia dɛ wͻdze yɛ edwuma na so ͻma binom kwan ma wͻtseetsee Ahmadiyyafo na wͻnye hͻn bͻ awer. Nda ebien a abɛsen kͻr no, wokum Ahmadiyyanyi bi wͻ Karachi. Nna nkyɛ wͻpɛ dɛ wͻkͻkum Ahmadiyyanyi bi so wͻ Jhelum a wopiraa no ma ͻda asopitsi siesiara. Nyankopͻn nsa no yarba. Muslimfo anyɛnkofo a wͻnnyɛ Ahmadiyyafo so mpo hͻn ho kãa wͻ aber a wͻtoow hyɛɛ Ahmadiyyanyi no do no. Wͻ Karachi kuropͻn no mu no, anyɛnkofo ebien a wͻka ho no so piraa ma wͻwͻ asopitsi. Dɛmara so na Jhelum dze no so, obi a nna ͻkã noho no so piraa ma ͻwͻ asopitsi. Yɛserɛ, Nyankopͻn nsa hͻn yar.
Nyankopͻn aka dɛ, iyi nnyɛ adze fofor, hͻn a wodzii kan dɛ wͻyɛ som bambͻfo no so yɛɛ dɛmara. Na Nyankopͻn aka dɛ obiara a ͻbɛbrɛ noho adze ama No no na ͻbɛyɛ ndzeyɛɛpa no benya no ho akatuapa wͻ n’Ewuradze nkyɛn. ankorankor biara nnyi hͻ a ͻbɛma obi Ahenman mu anaa Ogya mu tum krataa. Dza Nyankopͻn aka nye dɛ, obi a ͻbɛyɛ papa dɛ ͻdze rohwehwɛ Nyankopͻn N’enyigye no na ͻbɛyɛ mber yi mu kandzinyi (Imam) ne nsa mu Bai’at no dɛ mbrɛ Nyankopͻn Noara aka no renndzi awerɛhow na ͻnnkͻsuro biribiara. Ankorankor biara a oridzi dwuma a ͻtse dɛm ahwehwɛ Nyankopͻn N’enyigye no, obenya. Ahmadiyyanyi biara a wͻayɛ Bai’at wͻ dɛm kwan yi do no yɛ Muslimnyi mapa na obenya Nyankopͻn N’enyigye. Onnhia tum krataa mmfi amanyɛkuw biara hͻ ansaana wͻayɛ Muslimnyi.
Kuran kyɛfa a m’edzi kan akenkan no kyerɛ dɛ obiara a ͻbɛka ato gua dɛ ͻyɛ Muslimnyi na wͻabrɛ noho adze ama Allah no yɛ Muslimnyi mapa. Ɔnnkyerɛ dɛ obi na ͻwͻ dɛ ͻka to gua dɛ oyi yɛ Muslimnyi anaa osimasi yi na ͻyɛ Muslim. Mbom ͻwͻ dɛ ankorankor biara yɛ ahobrase ma Allah na wͻaka ato gua dɛ ͻyɛ Muslimnyi wͻ ͻnoara ne pɛ mu, na wͻyɛ krado dɛ ͻbɛyɛ ahyɛdze a Nyankopͻn dze ahyɛ no dɛ ͻyɛ Muslimnyi. Wͻaka ato do dɛ, ͻwͻ dɛ onya suban pa ka ho. Ɔnye dɛ n’abrabͻ botwa yie na oeyi bͻn akwa, ͻno na obenya n’Ewuradze nkyɛn akatuapa na onnkesuro biribiara na ͻnnkɛdzi awerɛhow. Bͻtͻ akͻ do ayɛ papa na atwe woho efi bͻn ho na ama wo gyedzi abor wiadze yi mu afɛfɛdze do no boa ma gyedzinyi nnyɛ mfomdo.
Anohoba Mɛsia (ANN) ka dɛ Islam ne nkyerɛase nye dɛ obi bͻtu noho ama Allah korakoraa na ͻyɛ ndzeyɛɛpa, ͻno na obenya n’akatuapa efi n’Ewuradze ho. Suro biara remmba no do na ͻrenndzi awerɛhow. Asekyerɛ nye dɛ Muslimnyi nye obi a otu noho dobodobo ma Allah na odzi Allah Ne pɛ do dze hwehwɛ N’enyigye. Na obegyina pintsinn wͻ papayɛ mu wͻ Nyame ntsi na ͻdze n’ahoͻdzen nyinara bɛyɛ edwuma ama Nyankopͻn. Yɛbotum aka dɛ ͻyɛ Nyankopͻn dze wͻ akwan ahorow nyinara mu, wͻ ne kasaa nye ne ndzeyɛɛ mu. Gyedzi afa mu nye dɛ ebͻdwen dɛ eyɛ Nyankopͻn N’abͻdze a eda no edzi na eyɛ setsie hwehwɛ No dͻ na N’enyigye. Ndzeyɛɛ afa mu nye dɛ edze w’adomakyɛdze nye w’ahoͻdzen nyinaa bɛyɛ edwuma dɛ mbrɛ w’enyi tua wo dͻfo bi do wͻ ahobrase mu (Essence of Islam, Vol. I, pp. 18 – 19).
Iyi nye gyinabew a ͻwͻ dɛ yenya wͻ gyedzi nye ndzeyɛɛ afa mu. Sɛ yenya nsakyerpa wͻ hɛn mu na yɛbͻ hɛn bra dɛ mbrɛ Nyankopͻn enyi gye ho a, ͻno atseetsee biara a yɛbehyia wͻ mbra kwan do no runntum nnhaw hɛn. Kansa ͻdze ͻhaw bͻto hɛn do wͻ wiadze yi mu mpo a, Nyankopͻn bɛgye hɛn ato mu. Kuran no akyerɛ edzikanfo no gyinabew a wͻkͻr mu dze ahyɛ hɛn nkuran; dze ahyɛ hɛn akoma dzen. Moses no nkorͻfo a nna wͻyɛ nkͻngyaayifo baa na ber a wͻgyee Moses dzii no, wͻkaa kyerɛɛ Pharaoh dɛ yɛdza epɛ dɛ eyɛ tsia hɛn biara, na asaase yi do ha yi ara na botum ayɛ biribi etsia hɛn (20:73).
Sɛ aban bi pɛ dɛ ͻyɛ bͻn tsia hɛn a, Pharaoh n’ewie dɛ mbrɛ ͻyɛɛ no da n’enyim. Na ͻwͻ dɛ yɛkyerɛ gyedzi a onnsuro adasamba. Kuran ada hͻn a wͻfrɛ hͻnho Muslimfo no edzi wͻ dɛm kyɛfa yi mu dɛ “Na hͻn a wͻbrɛ hͻnho adze ma Allah na wͻyɛ ndzeyɛɛpa na wodzi Abraham no som no ekyir dza ͻtsen no. Na Allah faa Abraham nyanko soronko” (4:126). Nyankopͻn akamfo Abraham wͻ Kuran Krͻnkrͻn mu dɛ “Na Abraham a ͻhyɛɛ no bͻ ma odzii mbransɛm do” (53:38).
Anohoba Mɛsia (ANN) no akyerɛɛw dɛ Hadhrat Abraham (ANN) nyaa Nyankopͻn nkyɛn kwan bɛɛn No osiandɛ na odzi nokwar, pɛrpɛr na ͻwͻ etuhoama. Dɛ ebɛyɛ nokwarfo na edzi pɛrpɛr ama Nyankopͻn No, gye owu. Obiara nnkotum enya gyinabew yi gyedɛ ͻpow ne wiadze yi mu akͻndͻdze nye afɛfɛdze nyinara na ͻyɛ krado dɛ ͻbɛgye enyimguase biara wͻ Nyankopͻn ntsi. Ɔbɛyɛ dzen dɛ obi botum edzi nokwar wͻ aber a ͻnnyɛ krado dɛ ͻbͻkͻ ͻhaw nyinara mu wͻ Nyame ntsi. Nyankopͻn rohwehwɛ ndzeyɛɛpa na N’enyi so gye ndzeyɛɛpa ho wͻ ber a dɛm ndzeyɛɛpa no botum ayɛ yaw yie. Naaso sɛ nyimpa yɛ krado dɛ ͻbɛtse yaw wͻ Nyame ntsi a, ͻmmfa no mmfa ͻyaw kwan do.
Dɛ obi beyi nyame biara efi n’akoma mu na ͻdze Nyankopͻn No dͻ ahyɛ n’akoma mu na oedzi Nyankopͻn Ne pɛ do na wͻayɛ setsie ama No dɛ mbrɛ sunsum yɛ setsie ma adze mu noara a nsonsonee biara remmba ͻnye Nyankopͻn hͻn ntamu. Dza nyimpa benya nyinara bodua mpaabͻ do. Anohoba Mɛsia (ANN) no kaa dɛ, Islam bɛda edzi wͻ obi mu wͻ ber a ͻdze noho nyinara bɛma Nyankopͻn na ͻdze n’ahoͻdzen nyinara na adze biara a Nyankopͻn dze ahyɛ ne nsa no, ͻdze nyinara bɛsan ato hͻ ama No. nnyɛ gyedzi afamu nkotsee, mbom ͻdze bͻkͻ nyɛɛ do. Iyi na ͻda Islam no nokwar no edzi. Ɔnye dɛ obi a ͻbɛka dɛ ͻyɛ Muslimnyi no, no nkwa nyinaa, ne nyansa, n’enyisoadzehu nye no sunsum na honam mu ahoͻdzen nyinara, n’egyapadze biara a ofi ne tsir kɛpem ne nan, dza ͻda edzi na dza ͻwͻ nsumaa mu nyinara, n’adwen na no suro a ͻwͻ n’akoma mu nyinara bɛhyɛ Nyankopͻn No tum ase. Iyi nye gyinabew a Ahmadiyyanyi biara wͻdɛ ͻbͻ noho mbͻdzen na onya. Dɛm kwan yi ara na obenya Nyankopͻn Ne bambͻ.
Kɛtseankyɛ Allah ama yeenya dɛm ahoͻdzen yi ayɛ dɛ mbrɛ ͻsɛ na ͻfata na Wͻama Kuw yi mu mba dodowara eenya dɛm gyinabew yi. Yɛserɛ Nyankopͻn dɛ Ɔmma yɛnyɛ asͻr yi yie na yɛmfa Islam ntsetsee pa no na Ɔmboa hɛn ma yenya Nyankopͻn N’adom ama wͻakan hɛn aka nkorͻfo a Nyankopͻn aka afa hͻn ho dɛ “nsɛm dɛw wͻ hͻ ma hͻn a wͻbrɛ hͻnho adze ma Allah no” (16:90) . Nyankopͻn mboa hɛn ma hɛn mu dodowara ntum nyɛ asͻr dɛ mbrɛ ͻfata na yenya Ne nkyɛn mbɛnee. Na ͻma yenhu hɛn atanfo hͻn ewie wͻ mber tsiabaa bi mu.
Ahmadiyyanyi a wokuum no wͻ Karachi no nye Chaudhry Hamid Sami sahib shaheed. Ɔnam ne nana do na Ahmadiyya baa hͻn ebusua mu na ͻnoara so hyiaa atanfo pii wͻ Ahmadiyya ntsi. Nna ne nana dze tam gu ne nsa do dze yɛ sumdzi da do. Wͻwoo Hamid wͻ Lahore. Odzii mfe eduonan awͻtwe (48) na nna ͻyɛ sikasɛm mu nkontaabufo (Accountant). Da a ofii mu no, nna ͻnye n’anyɛnkofo ebien bi rutu kwan na nkorͻfo bi a wͻtse kutukutufɛmfɛm (motor cycle) do bͻͻ no itur kuum no. Itur abobaa pii na ͻkaa no honamdua na n’anyɛnkofo no so pirapiraa. Hamid somm Jama’at yi wͻ sikasɛm nkontaabu mu. Na ͻyɛ obi a n’enyim da hͻ aber biara, ͻwͻ enyidze na ͻhwɛ n’ebusuafo yie. Ogyaa yer na mba ebiasa wͻ ekyir.
Yɛserɛ dɛ Nyankopͻn mbͻ n’ebusuafo ho ban na Ɔmfa owufo no kra nsi yie. Amen!